DNP "Mozhayskoe komkhathi": incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza
Namuhla, izakhamuzi eziningi ezweni lethu, futhi Muscovites ngokukhethekile, iphupho ekwakheni ikhaya lakho siqu, ukushiya ukhonkolo noma isitini iseli omkhulu isifuba zomphakathi emoyeni umuzwa isikhala ukusondela nature. Babefuna izikhangiso zalolu hlobo: "Ukuthengiswa umhlaba e DNP" Mozhayskoe komkhathi ", esingamahektare eziningi kangaka, imfanelo ethile, ingqalasizinda ethile," - bese senza ngokuvumelana nezimo. Nokho, ukuze uqale ukuthenga umuzi noma izwe, udinga ukuba sithole futhi sicubungule ulwazi oluningi. Lesi sihloko kungasiza emkhankasweni wakhe.
Ngemva kokubona isikhangiso ukudayiswa site, ingxenye enkulu yomphakathi azame ukuqagela ukuthi okushiwo izinhlamvu ebhekene igama "Mozhayskoe komkhathi." Phela, inani elingako ezanele izifinyezo, futhi uzulazule kuwo kumelwe. Kungaba izinhlamvu LPH, SNT, SGF, DNT. Hhayi wafundelwa daba ngokushesha ukunquma ukuthi izindlu zangasese - inketho emibi, DNT - ngokuqinisekile ukufakaza LPH - yinto ukulima futhi SNT - Gardener Association. Kodwa asikho isidingo ukuqagela, ngisho nangemva iziphonso out izifinyezo. Kuphela amagama ukusetshenziselwa injongo ethile iphuzu ukwakhiwa. Ukuqokwa iyobonisa konke ukuqina amaphutha, izinzuzo kanye izici uhlobo kuluthola iziza labantu ngalinye.
Okokuqala, i-isigaba komhlaba kufanele akhonjiswe. Uma unesithakazelo besemizini yabo nokwakhiwa bayo, kuphela ezweni nemizana ofanele futhi ngezinhloso zezolimo. Ngaphezu kwalokho, isigaba ngasinye salezi ezimbili kumele abe uphawu maqondana ukusetshenziswa kuvunyelwe. Yilokho ngakho bathi, ngenhla nje izifinyezo. Ngokwesibonelo, CNT kanye DNP kungenziwa esisogwini umhlaba wokulima, izindlu ngabanye - ikakhulukazi ezweni nemizana, kodwa LPH - kuphi. Okokuqala, thina wokufunda:
DNP - Chalet engenzi-nzuzo ukubambisana.
SGF - ngabanye ukwakhiwa kwezindlu.
LPH - ukulima yangasese.
DNT - dacha engenzi-nzuzo inhlangano.
SNT - engadini inzuzo ngokubambisana.
Kusho "Mozhayskoe komkhathi" libhekisela xaxa partnership. Noma kunjalo, kuyatuseka ukuba bazi umehluko kwezinye izinhlobo umhlaba, ukuze aqiniseke ngokunemba amkhethile.
ukwakhiwa kwezindlu ngamunye kungokwalabo esundu inombolo yokuthengwa, ngisho "Mozhayskoe komkhathi" sithengiswa okungekho kuhle. SGF - ekuqaleni osobala imigomo esemthethweni, ifomu ukuthenga, ngakho ezikhangayo. Okokuqala, okukhona ikheli ethize, bese esinikezwe imvume yokuba yisakhamuzi elulwimini lwabo kuyoba awunankinga. Abantu abangenalo ukubhalisa, eRussia lanamuhla kuyinkinga ukuphila, futhi ukusebenza angeke amukelwe. Ngaphezu ikheli le-imeyili lamukela i-imeyili: izincwadi, amaphasela, amaphephandaba, ama-oda kusuka ku-intanethi, nokunye. Ungase futhi kalula ukusebenzisa ikheli ukubiza i-ambulensi, umlilo - ukumema ochwepheshe ukuze izwe kuyabiza, lokhu kuyophumela isidingo isizumbulu icocekile. Land for ngabanye ukwakhiwa kwezindlu - kamasipala, Ngakho-ke, vele ziphoqelelwe ukuba nengqalasizinda: imigwaqo ihlanzekile ebusika, izikole, ezokuthutha, izitolo kanye nezibhedlela.
Nokho, akubona bonke izinzuzo SGF kuqhathaniswa DNP "Mozhayskoe komkhathi." Okokuqala, omkhulu lokususa - ngesakhiwo usayizi nomkhawulo wenombolo kwamahektare. Wanameka nendlu, lapho ephupha izinsuku eziningana, ngeke kuyafana grozah, ngoba kuyadingeka ukuze iqondise iphrojekthi nemithetho GOST futhi SNiP. Ngaphezu kwalokho, imfuneko lizokhokhiswa esisemqoka nesibaluleke i endlini yokufakwayo msebenzi. Futhi okubaluleke: intela kuzohluka kakhulu. Ngokwesibonelo, e-DNP "Mozhayskoe komkhathi" intela impahla% 0.3 kuphela yenani cadastral, kodwa izindlu zangasese - kakhulu ngendlela eyodwa kanti amaphesenti angu-isigamu.
SNT, DNT futhi DNP
Phakathi izinhlobo ezindaweni umehluko mncane. Ukuze SNT Kusolwa evundile, kunalokho, uthi, ngoba DNP. Kodwa ngesikhathi esifanayo ukubaluleka cadastral, okuyinto "Mozhayskoe komkhathi" (izindlu izindlu), aphansi, ngoba bonke ngokubambisana engenzi-nzuzo - ne grade engezansi izinga inhlabathi. Ngisho noma zonke izimo eziyisisekelo ziyafana, noma iyiphi ingxenye CHT izobiza ngaphezulu. Injongo kuyafana - engadini kanye cottage. Kodwa kumelwe ngivume ukuthi muva nje uye ngobubanzi okuningi. Njengabantu abaningi ukwakhiwa cottage, "Mozhayskoe komkhathi" - iholide ngomzana, eyenzelwe ophilayo. Kuphela lapha endlini ke kuyoba eshibhile!
Ngena ngemvume SNT, DNP futhi DNT ubuye ngempela kungenzeka, ngaphandle ukuthi ingabe kungenzeki ngokwalo, + njengasosukwini lokungivivinya ukwakhiwa kwezindlu zangasese. Kuyodingeka ukuba ukuqhuba luhlolo mayelana nokwamukelwa nokwakheka zoMthetho amazinga, bese ukufuna ukuqashelwa ilungelo lokubhalisa enkantolo. Nakuba lena Okusemthethweni, kuphoqelekile. Kodwa abantu musa abanandaba lapho ukhona. "Mozhayskoe komkhathi" ayelingana ngoba ngakwesokudla ukuze uhlale khona impi kancane futhi zithole ukubhaliswa isimo. Akulula kanjalo edolobhaneni iholidi ukuze afeze zokuxhumana - thiya ezihlukahlukayo kwezinkambiso zomthetho zokuphila umthengi nokungcebeleka. Kodwa "Mozhayskoe komkhathi" - a ukuthuthukiswa elibiyelwe ne Izinsiza. Ngesikhathi bendawo kuyoba imigwaqo, igesi, amanzi nokuhlinzeka ngogesi amandla anele: izithiyo zokuphatha iye yasuswa.
izindlu Iphele ku CHT, DNP futhi DNT zivamise edayiswa at kwezimo ezifanayo, lapho kushiwo ukuthi intengo umhlaba ifakiwe. Wabonakala ugesi kanye nemigwaqo, sidinga umnikelo target. Izinsuku uxhumano gas ngokuvamile cha qinisekisa ngisho ongacaciswanga kahle. Plumbing ngokuvamile abantu ukwenza bebodwa. Ngakho, ingxenye ezibizayo kuzokwenzekani okungenani ezine ayizinkulungwane ezingamakhulu ngaphandle kwamanzi kanye negesi. Kodwa kuhlukile ukunikela "Mozhayskoe komkhathi." inqubomgomo lwentengo ngokuphelele ugxile ikhasimende.
Kube inikezwa kufinyeta epulanini ugesi esigabeni ngasinye (380 V futhi 10 kW), kanye okudingekayo emaphakathi kwamanzi nokuthuthwa indle. Negesi ukusatshalaliswa substation naye uhlelo cottage zokuhlala "Mozhayskoe komkhathi." Izici ezindaweni ezinjalo, akunakwenzeka ukuthi kuyoba nabantu abangathandi lapha. Ziphethe ebaleni lokudlala sokuthutha udoti. Emhlabeni emzaneni - nothango oluzungeze ipherimitha futhi kuwo wonke yokungena wokubheka ukuphepha clock kanye nekhono kubangele ngokushesha. Imigwaqo ngaphakathi emzaneni - isihlabathi futhi amatshe. Kukhona ezemidlalo nasezindaweni zokudlala, amachibi ukubhukuda nokudoba futhi mangalnye endaweni ogwini.
Izinzuzo elingenakuphikwa futhi ngokuqapha
Umuntu othenga umhlaba edolobhaneni iholide, ungalokothi ngisele ngedwa nezinkinga zabo: esilandelayo sizobe abanazo abazakunitshela kube "Shag". Omakhelwane ngokuqinisekile uyoba ngowompristi ekilasini efanayo nabantu, okungukuthi, akekho kubo, azakhele ngayo indlu elinamakholomu kanye indiza kokwehla pad ophahleni: bonke babe namathuba cishe kulingana zezimali kanye imibuzo ehlobene kuya landscape ukuthi zingaxazululwa ndawonye.
Nokho, umuntu ngamunye ingaphakathi uthanda ukuba nibe ngabakaJesu kusendlalelo esithile, futhi uzizwa wedwa ezithile: imikhukhu futhi maqhugwane ngeke uyakhe "Mozhayskoe komkhathi." Izimpawu izakhiwo ukuhlinzekela izifiso ngabanye abahlali. Lula wukuthi ukucaciswa zokuxhumana akudingeki ukukwenza ngokwakho - kuba, ngasendleleni, futhi ishibhile, ukwedlula wedwa esisuka ipayipi noma ukuthenga futhi ufake ukusatshalaliswa igesi iphuzu noma esincane sikagesi transformer. Zonke lezi ukukhathazeka abiwa phakathi omakhelwane, ukwakhiwa abawugijimayo.
Yekuchumana ezihambisana cishe zonke ukuthengwa nezwe kanye nempahla, ngezinye izikhathi kungonakalisa wonke amaphupho odlule. Umnikazi kufanele bazi kahle ukuthi yini ongowakhe ngokukhethekile, ukuthi ngokuhlanganyela okungewakho abahlanganyeli DNP, nokuthi izohlala impahla umdayisi. Okokuqala, kubalulekile esivumelana ngakho - imigwaqo nokunye. Ngokuvamile basuke run by umnikazi wangempela ezweni. Into ezithakazelisayo kakhulu ukuthi, cishe, kuyoba noma endaweni yomphakathi kanye nengqalasizinda Imininingwane okungewakho umdayisi, noma idluliselwe DNP noma iyiphi inkampani management. Ngokuvamile, umnikazi akuyona kuphela ngithengise izwe, kodwa ngeke baphathe yonke eziyinkimbinkimbi. Lokhu kuzakutjho bona woke umusa ngenhla - izingane nezemidlalo edolobheni, imigwaqo namachibi ngisho izinhlanzi - uzohlala aba ngaphansi kwakhe.
Ngenxa umnikazi akakwazi nje ufuna ngithengise izwe - cishe ufuna futhi baphathe lokhu eziyinkimbinkimbi esikhathini esizayo. Ngakho, imigwaqo kanye nazo zonke ezinye emazweni zomphakathi (isib, ebaleni lokudlala ezivamile futhi echibini nge carp, isithiyo, elalivale umnyango ongena kuleyo nsimu kwalesi sigodi, ukubhekwa uhlelo) ukuhlala impahla. Ayikho imigwaqo, ayikho ingqalasizinda, akukho amapayipi, izintambo futhi izintambo noma kunjalo akubi impahla umuntu nomuntu othenga umhlaba e DNP "Mozhayskoe komkhathi", izici amasayithi yisibambiso, futhi lokhu isidingo sokwazi kusukela ekuqaleni. Umqondo wukuthi esigabeni ngasinye lutholwa ubuhlobo obuseduze jikelele uhlelo ingqalasizinda esekelwe izindlela ngokuhlanganyela kodwa eminye isikhathi ingasetshenziswa ngokuhlanganyela futhi.
Kufanele bazi ukuthi kuyinto engenakwenzeka ukuba azihlukanise emphakathini. Noma yimuphi inhlangano yalolu hlobo (DNT, DNP, noma iyiphi enye into) ngempela kuholela amalungu aso, okusho ukuthi kubalulekile ukuthatha zonke imithetho yayo ngokugcwele. Ngakho, zezimali, futhi. Ngakho, ngaphambi kokuthenga kuyadingeka ukuze elibanzi ukuhlola hhayi kuphela izifiso zabo kanye namathuba, kodwa futhi ukuqhathanisa ngayo amathemba okulindelwe omakhelwane bayo, ezinye abanikazi. Plus, udinga ukuhlolwa nizithibe kuzo zonke izici iyonke, okuyinto has a DNP "komkhathi Mozhayskoe." Izimpawu emzaneni kahle, kodwa akusho ukuthi endleleni eya ikhaya elisha ngeke ube nezinkinga. Isinqumo sokuthenga kufanele kulinganiswe, amadokhumenti uhlolisisa, nokuphila esizayo, khona-ke isikhathi mahhala futhi izimali etholakalayo - lokwelekelela ezilawulwayo.
Isinqumo sokuthenga icebo cishe njengoba kunzima njengoba umshado. Kunjengoba ubuhlobo eside, okungenani. Inyunyana nakanjani wadala, futhi ngeke bakwazi bayazehlukanisa kuwo. Ukulandela ukuthola izwe umuntu kuzohambisana imithetho inhlangano ibhizinisi yebungani, ngisho noma kuyinto zezikhulu zayo oyifakile. Lokhu kusho ukuthi izindleko zezimali, uma lokho isinqumo we Umhlangano Omkhulu, Bayothwala zonke okufanayo. Ungakwazi ngokuqinisekile uyothola phakathi komakhelwane ngangokunokwenzeka abantu abanazo kanye isibhakela noma Veto izinqumo ezithile, kodwa kuba enzima kakhulu futhi akusho ngaso sonke isikhathi ukuletha umphumela oyifunayo. Uma ubuhlobo omakhelwane edolobhaneni iyoba onezinkinga, kukhona ezimbili kuphela okungakhethwa kuzo: ukwamukela yonke imigomo kanye umthwalo ngokwezimali noma ingxenye phakade, okungukuthi, ukuthengisa indlu amaphupho abo e-DNP "Mozhayskoe komkhathi."
amakhilomitha Twenty kusuka edolobheni Mozhaisk, eduze nasemizaneni Denisiev Shalikovo, onqenqemeni ehlathini itholakala into isifiso ka Muscovites abaningi, hhayi kuhlanganise zomdabu. Kusukela Ring Road iyindawo sise ibanga amakhilomitha ayisikhombisa nanhlanu Mozhayskoe noma Minsk onguthelawayeka. Lona DNP "Mozhayskoe komkhathi." Izithombe zibonisa ngokucacile uhlobo indlela enhle lapha. Ensimini zikhona 193 iziza ezahlukene - ukusuka abayisishiyagalolunye esingamahektare amabili nambili ngosayizi. Ungakhetha isiqephu sendawo nokufinyelela kwangasese ehlathini, unga - emkhakheni, ukuze amanzi, ku osebeni komsele.
Izindleko uzungu ngalinye akufani, futhi, intengo zokhahlamba kusuka amabili kuya amane anamahlanu amawaka, ruble angu eziyikhulu square metres. Edolobhaneni ungaphila unyaka wonke, kukhona ukufinyelela. imvelo enhle budebuduze naleli "amanzi enkulu" - amadamu amabili kukhona amakhilomitha esingaphansi amabili, emahlathini amakhulu nge izithelo kanye amakhowe - konke lokhu at zizinhle ephawula "Mozhayskoe komkhathi." Uphenyo isakhiwo abonakala kakade efanele ulwazi imithombo, ngokuvamile wazi izenzakalo ezinhle: izakhi abasafufusa kwengqalasizinda, olwenziwa amanethiwekhi ugesi, imigwaqo, ukudweba, amapayipi ebusika.
ukufinyeleleka Ezokuthutha, ngokuvumelana ukubuyekezwa, kuyinto enhle kakhulu. Akukona nje kuphela ukuthi kukhona unyaka wonke ukhululekile asphalt komgwaqo baye ezindaweni ezingasemifuleni cottage, ngakho nethuba ukuvakashela yokusebenza e Moscow, beya nsuku zonke ezokuthutha zomphakathi. Speedway Minsk onguthelawayeka amamitha angamakhulu ayisishiyagalombili kusukela okuseshwa kuzo, okuyinto omkhulu ezingeni European, ngaphezu lemizuzu ayisishiyagalombili-edolobhaneni - esiteshini "Shalikovo" lapho kunoma iyiphi sezimoto ezimele isitimela kagesi ekuseni domchat eMoscow futhi yabuyiselwa kusihlwa phakathi imvelo ungakhululeka kusukela umsindo befuna ngosuku obekusetshenzwa ngalo.
Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukusebenza Mozhaisk - ingqalasizinda yayo dvolno athuthukile. Ngaphezu kwalokho, DNP "Mozhayskoe komkhathi" ngenxa ukusondela kulo muzi ngeke azizwe nginqume impucuko, njengoba kuyintando ukusondela ezinjalo kwenza kube nokwenzeka ukuba athole ngesikhathi esifanele usizo olufanelekile yezokwelapha noma ezinye ukuzuza yimuphi zomphakathi, kanye namasiko - idolobha ngoba ubudala, elinomlando ekhazimulayo, futhi muhle kakhulu. Kukhona izibhedlela, izitolo, izikhungo, amabhange, eziyinxanxathela ezinkulu, zokubukela amabhayisikobho kanye Museum asemkhathini ngokumangalisayo.
Lapha ungakwazi ukuthenga hhayi kuphela ingxenye blank (ngaphandle inkontileka), kodwa futhi ngokuvumelana ikhasimende ukuba umakhele indlu ku iphrojekthi ngabanye ngesikhathi onjengaye. Muva nje, NAM salandelwa umnikazi. Agcina eseyinto "Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke" ebhange. "Mozhayskoe komkhathi" osenza umhlaba. izigaba Isimo yangaphambili: isabelo isigaba sezwe - yezolimo, ukuthi uvunyelwe yiluphi uhlobo yokwakha cottage, kodwa kukhona kwezinhlobo nokuthi isimo zizoshintsha, futhi kuyoba ngamunye ukwakhiwa kwezindlu (izindlu ngabanye), nge izinzuzo abafanele ezifana yokubhalisa kanye minuses - intela. Nokho, ukwakhiwa kwesokudla indlu yokuhlala bekulokhu. ngesakhiwo ngamunye DNP "Mozhayskoe komkhathi" ifakwe ipasipoti cadastral kanye nesitifiketi sokubhalisa isimo amalungelo endawo. With ukuthengwa komhlaba kuyinto inkontileka sokuthengisa, futhi emfushane (Ngosuku lwamashumi amabili nanye) ngenkathi amalungelo kusayithi uzobe ukuqinisekisile ngokuthola izitifiketi abafanele.
Ingqalasizinda kwalesi sigodi holiday kubafanele okubaliwe enemininingwane.
Along azungezwe we sigodi kocingo, kukhona unyaka wonke Ukuvikelwa lonke.
yokupaka lezivakashi isakhiwo zokuphatha.
Isayithi ye ukwakhiwa imfucuza nendlu udoti.
A zokudla esitolo futhi esiteshini esincane sikagesi ukusatshalaliswa igesi.
izindawo nezokungcebeleka endaweni ehlathini ku emiseleni.
Cishe cishe konke mayelana ne-DNP "i-Mozhaiskoye expanse." Indawo yendawo yakhiwe ngamahektha angamashumi ayisikhombisa nengxenye, ngakho-ke wonke amasayithi ahlukile - kuwo wonke amathrekhi. Kubalulekile ukubheka eduze nalabo abaseziqhingini, ngoba ukuphakama okukhulu kwamanzi angaphansi komhlaba kungenzeka, uma umfula ogeleza ensimini ungabhekana nokunyuka kwonyaka ezingeni. Isifunda sonke saseMozysysky, ikakhulukazi indawo yeDNP, asibhekwa njengezimboni esifundeni saseMoscow. Lapha, umoya ohlanzekile namanzi ahlanzekile, ihlathi elicebile ne-meadow motley utshani. Azikho amabhizinisi asebenzayo eduze komphakathi wama-cottage futhi akukho ukulahlwa kwemfucuza. Izinga lokuphila kulokhu lokubuka lihle kakhulu, okuqinisekiswa yizibuyekezo eziningi.
Ngisho nemigwaqo eseduzane itholakala kude ne-checkpoint - kude no-750-800 amamitha, kanti isitimela sihlukaniswa nomuzi ngasemahlathini avulekile. Le ndawo, nokho, iyisicaba. Kodwa kusukela emoyeni onamandla umzana uvikelwe amahlathi e-coniferous. Kunoma yikuphi ukuthutha, kufaka phakathi izithuthi zomphakathi, ungadlulisela emigodini yamanzi - kokubili uRuzsky neMozhaisk. Hamba ngezinyawo (cishe ikhilomitha) waya emzaneni waseShakokovo, lapho kunezitolo ezihlukahlukene. Emakhilomitha amahlanu - umuzi waseSputnik, lapho isikole, inkulisa, izitolo ezihlukahlukene zisebenza khona. I-dacha settlement "i-Mozhaiskoye esibhakabhakeni" yindawo evundile yensimu yesikhathi esizayo, indlu ehlelekile, ephushulwa, futhi ihora elilodwa nengxenye phakathi kweMoscow ngesitimela.
Izinhlobo futhi ngenhloso yokuhlola inani lemakethe komhiaba
LCD "Ukuthula Park": ukubuyekezwa, izincazelo, amanani
Skirt eyenziwe ijezi - indlela ukukhetha?
Yini benze amantombazane: 5 ongakhetha
Indlela ukupheka pepper eyayigcwele kuhhavini - zokupheka kanye nezincomo
I-Biography ka-Amiran Sardarov - umculi wevidiyo omdumile nomlobi